RASMI: Fernandinho oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Manchester City… (Imise sano ayuu saxiixay?) – Gool FM
RASMI: Fernandinho oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Manchester City… (Imise sano ayuu saxiixay?)
Haaruun June 29, 2021
(Manchester) 29 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka dhisan Waddanka Ingiriiska ayaa heshiis cusub ka saxiixatay ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee Fernandinho.
Fernandinho ayaa heshiiskiisa kooxda Manchester City ku kordhiyey 12-bilood oo cusub, taasoo ka dhigan inuu ballaareeyey xirfaddiisa sagaalka sanadood ee garoonka Etihad.
Kooxda Manchester City ayaa xaqiijisay in Fernandinho uu qalinka warqadda duldhigay isla markaana uu saxiixay heshiis kooxda ku sii hayn doona ilaa xagaaga 2022-ka.
Kabtanka Man City ayaa markii uu heshiiska cusub qalinka ku duugay waxa uu beegsaday bartiisa Twitter-ka waxaana uu ku soo qoray: “Waan ku faraxsanahay inaan sanad kale u saxiixo kooxdan cajiibka ah, waxaan rajeynayaa inaan sii wado safarkayga iyo inaan gaaro himilooyin badan.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Allaah, Qoyskeyga, Asxaabteyda kooxda, shaqaalaha iyo mahadnaq gaar ah oo aan u jeedinayo taageerayaasheenna cajiibka ah ee i taageeray ilaa maalintii koowaad.”
Laacibkan khadka dhexe ayaa kaga soo biiray Man City kooxda Shakhtar Donetsk bishii June ee sanadkii 2013-kii, waxaana la bedelay qeybtii labaad kulankii Man City ay 1-0 guuldarro ah kala kulantay Chelsea bishii la soo dhaafay.
350 kulan ayuu u saftay kooxda Man City, iyadoo 36-sano jirkaan uu kula guuleystay naadiga 12 koob oo ay ku jiraan afar horyaalka Premier League iyo lix League Cup.
Sky Blue kooxda lagu naynaaso ayaa la warinayey inay bedelka laacibkan Fernandinho u doonayso inay u soo qaadato laacibka naadiga Aston Villa ee Jack Grealish.
Brazil vs Chile: Isku aadka siddeed dhammaadka Copa America oo dhammaystiran & Goorta la ciyaari doono
Liiska 22-ka ciyaaryahan ee xulka Spain uga qeyb galaya ciyaaraha Olympic-da oo la shaaciyey… (Pedri & Asensio oo hoggaaminaya)